Aniga oo ah (gabar, 15 sanno jir ah) waxaa igu dhacay jacayl. Waxaan qabbaa su’aalooyin aad u baddan oo ku saabsan galmada. Ma garanayo sida aan u weydiiyo. Waalidiintaydu waxay dhahaan: Anigu uma baahni in aan oggaado waxyaabaha “sidaas oo kale ah” sababtoo ah waxaan qabaa dhibaato waxbarashada ah. Dhibaatada waxbarashada macnaheedu waxay tahay: In aan u baahanahay wakhti baddan iyo caawimaad la igu caawiyo waxyaabaha qaar. Kadibna wax kasta waan fahmayaa. Qofkee igu caawin kara su’aalahayga? – Tips for refugees
Previous Previous post: Aniga oo ah (wiil,16 jir ah) waxaan leeyahay saaxiibad. Waxaynu isku jecelnahay si aad ah waxaana aad u jecelnahay in aynu isku soo dhowaano oona isla baashaalno. Hadda waxaynu doonaynaa in aynu inbaddan galmo isla samayno. Sideen ugu samayn karnaa sida saxda ah? Siduu ku geli karaa xubinka taranka raga gudaha xubinka taranka dumarka?
Next Next post: Saaxiibadayda iyo Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaynu is-weydiinaynaa: Goorta aan dharka iska bixinayo si aan galmo u sameeyo?